Hoos U dhaca Bitcoin Ku Dhawaad $1,000 iyo S&P 500 Oo iyane Hoos U dhacday 4.5% Maxay Tahay Waxa Indho’Indheeyayaashu – Kiribto Somali Media
Lacagaha kiribto oo dhan aya marqura la arkay iyagoo hoos u dhac xoogan galay, taas oo keentay in bitcoin darbigiisii $9.500 u hoos usoo jaro ilaa $9.070 waxay ahayd uun 24saac ka hor markuu bitcoin isku dayay in uu darbiga $10.000 ka dul maro balse ma noqon mid dhabowda, hoos u dhacaan ayana ka dhigaya in bitcoin $1.000 hoos u soo dago,
Lacagaha kiribtada ee looyaqaan altcoin ayaa la qaba hoos u dhaca culus, ee suuqa xiligan laga dareemayo,
Hoos u dhacan ayaa yimid kadib markii la arkay, suuqyada dhinaca derivatives’ka loo yaqaan oo dad badan lacagi kaga dhuntay, sida ay baahisay shirkada Skew waxaa lacag laga helay dadka qamaarka bitcoin ku ciyaara suuqyada aan kor ku soo xusnay oo ay ka mid yihiin BitMex, iyo kuwa kale BitMex’ kaliya aana dadkii dhahay bitcoin kor ayuu uqaaliyobayaa, ka helay lacag dhan $65 milyan, oo kaliftay in qiimaha bitcoin hoos uga dago darbigiisii ahaa $9.500, oo isla xiligaasna uu helay lacag dhan $17milyan, balse hada bitcoin ayaad mooda in uu darbi kal helay $9.070.
Bitcoin ayaad maanta siwayn looga dareemayaa ku xirnanshah suuqa caalamiga ah ee S&P 500.
Xaalka adag ee bitcoin wajahay, ayaa la sheegay in uu ka yimid hoos udhaca, maanta suuqa ugu wayn suuqyada mareykanka ee S&P 500, oo hoos udhac garaya ilaa 4.5% laga dareemayay, waxayna maanta suuqyada waawayn ee dunida sida,Nasdaq, Dow Jones Apple, Microsoft, iyo Amazon, ayaa la qabay hoos udhaca dhinaca suuqyada saamiyada dunida.
Hoos udhaca qiiimeed ee suuqyada saamiyada, ayaa imaaday kadib markay, gudiga hanti dhowrka federalka’ mareykanku sheegeen in lacagta intareska wadanka ku haynayaan, labo sano iyo bar, 0%.
Waa xili hore oo lama ogaan karo, dhaawaca ay kalifidoonto arintaan, marka ay noqoto mustaqbalka suuqyada saamiga, ee dunida gar ahan kuwa mareynka, balse waxaa jiri doono in ay soo kordhaan, shirkadaha faqrinaya, oo suuqa aan lagu sii arki doonin sanad’yada fooda nagu soo haya.
Bitcoin ayana waynaya darbiyadiisa adag dhinaca hoose.
xogta Jonny Moe
Hoos udhac ahan marka loo fiiriyo garafkan mudada dheer kor usocodka ku dhismayay hadii bitcoin uu uga soo noqdo hoos, waxaa laga yabaa in suuqa uu galo iska gadis kale oo bitcoin u horseeda hoos u dhac sidaa waxaa yiri midka mid ah sarifleyda sida maalinta ah bitcoin uga ganacsada isagoo eegaya dhaq’dhaqaqa bishii maarso ilaa abril